Ilowsha dhawaa ma umul baa, Itoobiyana Igaarsanaa [Maqaal] • Horseed Media
You are here: Home / Opinion / Ilowsha dhawaa ma umul baa, Itoobiyana Igaarsanaa [Maqaal]
Ilowsha dhawaa ma umul baa, Itoobiyana Igaarsanaa [Maqaal]
January 7, 2017 - By: HORSEED STAFF
Taangi Itoobiya leedahay oo taagan Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho 2007
Arrimahaas waxaa ka dhashay in Itoobiya siyaasad ahaan iyo ciidanba si toos ah ugu lug yeelato fara gelintay ku haysay shacabka Soomaaliyeed waqtiga burburka.
Iyadoo taas ka duulaysa ayey Itoobiya waxay maanta markale dabada ka riixaysaa Xasan Sheikh Maxamuud inay ku taageerto siduu kursiga ugu sii fadhiyi lahaa. Akhristow Itoobiya taageerada ay Xasan siinayso kama ahan dawlad Soomaaliyeed ha dhisanto ee waxay ka tahay “Yaa wadankaan burbursan ee bohosha ku jira halkiisa ku sii hayn kara ama meel ka xun sii geyn kara” waana taas siyaasadda ay ka urinayso Xasan, iyadoo aqoonsatay inuu yahay qof aan waxba ka tarayn dhismaha qaran soomaaliyeed taas bedelkeedna tiirarka u sii siibaya wixii astaan uu lahaa hadayba wax ka hareen.
Imaaraadka iyo Soomaaliya
Meeqa mashruuca ayeey Emaretku ka fuliyeen Soomaaliya, mudadii dhowrka sano ahayd ee ugu danbaysay, xoolihii iyo Ganacsigii Soomaaliya xagee yaala ma Addis Aabab mise Dubai, Ilowsha dhawa ma umulbaa Ehtiopia igaarsanaa
Xasan Sheekh wuxuu shalay ahaa kuwii lahaa muqaawamo ayaan nahay oo Itoobiyaan dalka ka saaraynaa, waxaan maqli jirey “Ma umul baa ilowshiyo dhowaa”.
Akhristow, su’aasha meesha taal waxay tahay, Xasan Sheekh sidista Itoobiya sidato, ma ku soo celinaysaa kursiga uu afartii sano ee la soo dhaafay ku fadhiyey, oo ay hubaal tahay in bulshadii Soomaaliyeed meel kasta ka nacday oo hiifayso?